Man United oo barbaro la soo gashay FC Rostov oo ay booqatay iyo kulamadii kale ee la ciyaaray Europa League… + SAWIRRO – Gool FM
(Rostov) 09 Maarso 2017 – Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waddanka Ruushka caawa barbaro 1-1 kula soo gashay naadiga FC Rostov lugta hore ee wareegga 16-ka Europa League.
Man United ayaa goolka la horreysay waxaana u dhaliyey 35’daqiiqo Henrik Mkhitaryan, kaddib markii uu si wacan u dhammaystiray kubbad uu u soo dhigay Ibrahimovic, sidaas ayaana lagu kala nastay kooxda Jose Mourinho oo hoggaanka u haysa ciyaarta.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta FC Rostov oo marti loo ahaa ayaa la timid goolka barbaraha waxaana u dhaliyey 53’daqiiqo Aleksandr Bukharov, kaddib markii karoos loo soo qaaday inta xabadka ku degsaday shabaqa gaarsiiyey, waxaana uu ciyaarta ka dhigay barbaro 1-1.
Labada dhinacba waxa ay isku dayeen inay goolka guusha la yimaadaan laakiin kulanka ayaa ku soo dhammaaday barbaro 1-1, waxaana Man United oo gool ay dibadda ku soo dhalisay wadata ay Old Trafford kula ciyaari doontaa kooxdan ka dhisan Ruushka.
Kulamadii kale ee la ciyaaray Europa League:-